Umbona njani umzobi kunye nomxholo wengoma ngaphandle kosetyenziso lwangaphandle kwi-iOS nakwi-Android | Iindaba zeGajethi
Namhlanje uninzi lwethu lusetyenziselwa ukufumanisa umculo kunye nomculi ngokusebenzisa izicelo zomntu wesithathu xa umamele, kodwa kukho indlela elula yokwenza oku ngaphandle kokusebenzisa izicelo zomntu wesithathu. Oku kunokubonakala kumangalisa kwaye intsha ayisiyiyo kwaphela kwaye sikhe sanalo olu khetho kwizixhobo zethu eziphathwayo ixesha elide, ukukunika umkhondo esiza kukuxelela ukuba iphantse yadala njengeyethu I-iOS kunye ne-Android wizards.
Ngengoma edlulileyo, abaninzi baya kuba sele besazi isisombululo phantse ngokuqinisekileyo. Kungenzeka ukuba uninzi lwenu selusebenzise le ndlela ukuchonga iingoma kunye nomculi wengoma edlala kanye ngalo mzuzu nge-smartphone yakho, kodwa ngokuqinisekileyo baninzi abasebenzisi abangayaziyo le ndlela ikhoyo kwaye siyaphinda , akukho fakelo olufunekayo nakweyiphi na insiza yomntu wesithathu. Ngokusengqiqweni, unxibelelwano lwenethiwekhi luyafuneka ukwenza le nyathelo, kodwa le yinto namhlanje phantse wonke umntu one-smartphone anayo.
1 Umbona njani umzobi kunye nomxholo wengoma kwi-iOS
2 Ungambona njani umzobi kunye nomxholo wengoma kwi-Android
3 Ii-apps zomntu wesithathu zisebenza kakuhle kodwa azidingeki
Umbona njani umzobi kunye nomxholo wengoma kwi-iOS
Amanyathelo alula kodwa ngokucacileyo kufuneka ubazi. Into yokuqala ekufuneka siyazi kukuba ngqo kwaye ngelizwi lethu Sinokwazi ukuba yeyiphi ingoma edlalayo, igcisa kunye nenye idatha.
Kulula kwaye kuyakhawuleza, into yokuqala ekufuneka siyenzile kukucela ngokuthe ngqo umncedisi weSiri we-iPhone, i-iPad, iPod Touch okanye iMac.Ngalo mzuzu kufuneka sibuze umbuzo: Yeyiphi ingoma edlalayo? kwaye iya kuphendula ngo: «Makhe ndimamele ...» Kanye ngalo mzuzu sinokusondeza isixhobo kancinci kwisithethi okanye kwindawo apho umculo udlalwa khona kwaye ngqo emva kwemizuzwana embalwa iya kuchonga ingoma kunye nombhali wayo.
Kwimeko yomncedisi weApple Siri, ukongeza ekunikezeni igama lomculi kunye nomxholo, enkosi kwisicelo seShazam, isinika ithuba lokuthenga ingoma okanye ukuyimamela ngqo kwinkonzo yomculo osasazwayo, Apple Music. Enye inkcukacha yokugcina engqondweni kukuba kumfanekiso ongasentla ubuyiselwe ngokufanelekileyo. Kuqala sicela i-Siri kwaye emva koko iphulaphule kwaye inike idatha, musa ukujonga iodolo yezithathiweyo kuba yenye indlela ejikelezileyo.
Ungambona njani umzobi kunye nomxholo wengoma kwi-Android
Ngoku siza kwenza into enye esiyenzileyo kwi-iPhone yethu okanye kwi-iPad nge-iOS kodwa ngesixhobo se-Android. Inyani yile yokuba iyafana naleyo siyenzileyo kodwa sisebenzisa umncedisi kaGoogle ngomyalelo welizwi «Ok google«. Nje ukuba i-wizard icelwe ukuba sibuze umbuzo omnye esiwenzileyo kwi-iOS, yeyiphi le ngoma?
Njengoko ubona kumncedisi kaGoogle sikwanolwazi malunga nomhla wokukhutshwa, uhlobo olo umculo ungowalo kwaye kunokwabelwana ngalo ngokulula ngokucofa ezantsi. Zombini ezi nkqubo zibonelela ngesantya kunye nokulula kwizicelo ezininzi ze chonga umculo asinayo. Singatsho ukuba olu lolona khetho lufanelekileyo lokuba uyazi ingoma kunye nomculi ovakala ngendlela enemveliso kwaye ilula.
Ii-apps zomntu wesithathu zisebenza kakuhle kodwa azidingeki
Siyazi ngobukho be izicelo zomntu wesithathu onokwenza lo msebenzi kwaye aphucule ukhetho olunikezelwa yi-Apple okanye ngabancedisi bakaGoogle ngokwabo, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo kuyakhawuleza phantse kuzo zonke iimeko ukubuza umncedisi ngqo ukuba yeyiphi ingoma edlalayo ngalo mzuzu nangaphezulu kwalo lonke inani lolwazi ilungile inikezela. Njengoko ndithethayo, asinakho ithuba "lokuqalisa" loo ngoma ngqo kwinkonzo yethu yomculo esiyithandayo njengoko sinokwenza nezinye iinkonzo, kodwa oku kuncinci kubasebenzisi abaninzi.
Into emnandi ngokusebenzisa le ndlela ukongeza kwi ilula kwaye iyakhawuleza Yintoni le, kukuba ibonelela wonke umntu ukuba abone ukuba yeyiphi ingoma edlala naphina ngaphandle kokukhuphela usetyenziso kwi-smartphone. Oosiyazi bafakwe kwiikhompyuter ngokwendalo ngoko ke kulula ukuzisebenzisela le misebenzi kunye nabanye abaninzi.
Ngaba ubulazi eliqhinga? Ngaba ukhe wayisebenzisa ngaphambili?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Umbona njani umzobi kunye nomxholo wengoma ngaphandle kosetyenziso lwangaphandle kwi-iOS nakwi-Android
I-Black Shark 3 kunye ne-Black Shark 3 Pro, esemthethweni eYurophu, ezi ziimpawu kunye namaxabiso